Somalia: Ra’iisal wasaare Kheyre oo gaaray deegaanka Balli-Doogle ee gobolka Shabeellaha hoose - Wargane News
Home Somali News Somalia: Ra’iisal wasaare Kheyre oo gaaray deegaanka Balli-Doogle ee gobolka Shabeellaha hoose
Ra’iisal wasaaraha xukuumada Soomaaliya Xassan Cali Kheyre iyo wafdi uu horkacayo ayaa goor dhaw oo maanta ah gaaray deeganka Bali doogle ee gobolka shabeellaha hoose halka saldhig ay ku lee yihiin ciidamada dowlada.
Ra’iisal Wasaaraha Xukumadda iyo wafdiga ka socda ayaa lagu wada in ay kulamo la qaataan Saraakiisha ciidamada dowlada ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose.
Dhinac kale inta u dhexeysa deegannada Muuri iyo Baladu-aamin ee Gobolka shabeellaha hoose waxaa ka socda dagaal u dhexeya ciidamada dowlada iyo Al shabaab ilaa iyo haddan lama oga khasaaraha dhabta ee ka dhashay.
Safarkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee ra’iisal wasaaraha uu ku tago meel ka baxsan magaalada Muqdisho gudaha Soomaaliya tan iyo markii xilkan loo dhaariyay.
Ra’iisal Wasaaraha Xukumadda iyo wafdiga
Xassan Cali Kheyre